Keychains sobuhlalo ifoni uhlale amahle kakhulu futhi ezihlukahlukene. Yingakho esikhathini sethu isibe lo msebenzi, lobuhlalu ikakhulukazi nokwelukiweyo amaketanga ukhiye ezidumile ikakhulukazi phakathi kwabantu Ukugunda. Phela, inqubo, ungabonisa zonke iziphiwo zakho wobuciko kanye namakhono yokudala, ukudala ngobuciko nomona bonke abanye kweqiniso. Kodwa okubaluleke kakhulu - ukuthi lo msebenzi kuzokwenziwa ngezandla zakhe, futhi ukukwenza akunzima, nje kudingeka nje kancane futhi kancane nesineke.
Lo msebenzi esifanele imfundamakhwela inaliti abesifazane. imikhiqizo ezinkulu futhi eziyinkimbinkimbi edinga isineke, amakhono kanye nolwazi. A aluka lobuhlalu amaketanga ukhiye kungaba ubani, futhi ukwelukwa yabo izikimu zahlukahlukene ngakho futhi ngesikhathi esifanayo elula, yonke le nqubo ithatha nje eziningi imizwelo eyakhayo. Kukhona izindlovu multi-anemibala izinja, amakati cute futhi amabhere amaningi nezinye izinto fun nezilwane kancane. Akukho isifiso sokusebenza ku isethi izingcezu kusukela ku-inthanethi, ungaxhuma ngokuphepha iso lakho lengqondo futhi uthole ukusebenza!
Kusukela aluka lobuhlalu amaketanga ukhiye? Okokuqala, sokuthuthukisa leli ubuciko obuhle liyadingeka Yiqiniso, ubuhlalu, kungcono ukuba ukhethe Czech. Muhle kakhulu ngisho futhi abushelelezi, nge Iphalethi ocebile imibala kanye shades nombala olumelana nezinto ezahlukene kwemvelo. Okwesibili, sidinga line ukudoba, okuzokwenziwa ubuhlalu alengiswe, kodwa kungcono ukuphuma for a wire ithusi. Kuyinto mncane futhi sikulungele ukuzivumelanisa nezimo. Lokhu esheyininikhiye liyoba likhulu ukugcina ukuma. Ngaphezu wire yethusi kuba lula ukusebenza, njengoba kuqhathaniswa line ukudoba, okuyinto kuzodinga inaliti ekhethekile esihle. Kodwa lena akuyona inkinga. Namuhla ungakwazi kalula uthole ngisho mncane kakhulu bead inaliti, okuvumela ukuba sisebenze ubuhlalu kulencane.
Kungcono ukulungiselela konke ababekudinga ukuze umsebenzi. Okwenza amahle ukhiye lobuhlalu ngamaketanga, nakanjani kudingeka ezihlukahlukene ngamaketanga futhi ingwegwe, kanye ubuhlalu, zokuphepha izikhonkwane futhi sikelo. Emsebenzini kufanele kube mahhala izinto ezingasadingeki ukubeka indwangu emhlophe, ngoba umsebenzi kuyoba lula kakhulu, futhi ubuhlalu ngisho nihlakazeke, bayoba lula ukuqoqa. Ngaphambi kokuqala umsebenzi kufanele ukunquma ngokunembile ukukhetha womumo nemibala esheyininikhiye. Lokhu kuzosiza ezihlukahlukene amasayithi ngenalithi, lapho amakhosi professional ngiyisho nokuthi ukubonisa kanjani ukuba sifake lobuhlalu amaketanga ukhiye ngezandla zabo.
izinhlobo amahle kakhulu lobuhlalu ocingweni, wenza uphawu zezinkanyezi. ukukhiqizwa yabo ulula, kodwa ngesikhathi esifanayo, isipho esinjalo ukuba abe umngane oseduze kuyoba omunye esimnandi kakhulu, original kanye inhliziyo. Ayikho isipho nicer kuka ukumangala, izandla zakhe siqu, okuyinto etshaliwe ingxenye umphefumulo nothando. Lezi amaketanga ukhiye lobuhlalu engenziwa izikimu ezikhona, futhi ungakwazi beveza siqu Umdwebo yakho yangempela. Kungaba yini, ezifana inhliziyo noma yimuphi sibalo Jomethri. Ngo womshini lo mklamo kufanele aqondiswe umthetho owodwa eyodwa kuphela - isikimu kumele kancane sidonse umugqa mpo. Kungemva kwalokho umkhiqizo osuphelile izovuleka umumo square njalo.
Zonke lezi langa izintelezi ubuhlalu weaved besebenzisa amasu ngesandla ukwelukwa. Master le ndlela kulula kakhulu. Lo msebenzi kufanele ngaso sonke isikhathi uqale kusukela ekhoneni eliphansi ngakwesokudla futhi siqhubekele up. Uma lokhu umhlobiso senziwa wire ithusi, kungenzeka ukwenza e isendlalelo esisodwa, njengoba uhlaka wire eyomsiza ukuba ugcine ukuma, kodwa uma isisekelo emahlathini kuqokwa, anamathele kangcono ukwenza double. Kulokhu, zonke ubuhlalu kakhulu futhi nenombolo zokugcina ukuba axhunyiwe. Ekupheleni kungenziwa kuphela enamathiselwe carabiner keyring. Lokhu umhlobiso uyobheka njalo fresh futhi original ocingweni, ukhiye, noma emotweni.
Origami noma indlela yokwenza imvilophi ezenziwe iphepha
Hit isizini: omfisha satin kudabuke
Flexagon Hack. Indlela yokwenza yezandla ngakuthathu?
Baduduza kanjani i-Timelapse ngokunyakaza? Funda ukuthi ungadla kanjani umugqa wesikhathi ngokufanele
Ihhotela Houda Igalofu Beach Club 3 * (Tunisia / Monastir): izithombe kanye nokubuyekeza
Uyini umehluko phakathi kokuthuthukiswa kwemvelo nomphakathi? Umqondo wokuthuthukiswa komphakathi nokuziphendukela kwemvelo